UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika: Isihlomelo 6. Amalungiselelo Exesha Eliphakathi
My Constitution UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika Isihlomelo 6. Amalungiselelo Exesha Eliphakathi
Isihlomelo 6: Amalungiselelo Exesha Eliphakathi
[ISihlomelo 6 senziwa utshintsho sisiqendu 6 soMthetho Wokuqala Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo- siseko ka-1997, nasisiqendu 5 soMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-1998, nasisiqendu 20 soMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2001.]
1. Ukuchazwa kwamagama
Kwesi Sihlomelo, ngaphandle kokuba okunye okubhaliweyo kuso kubonisa ngenye indlela—
“iphandle” yinxalenye yeRiphablikhi eyayisithi, ngaphambi kokuba uqalise ukusebenza uMgaqo-siseko wangaphambili, ithathwe ngokomthetho wepalamente woMzantsi-Afrika njengelizwe elizimele geqe okanye elizilawulayo;
“uMgaqo-siseko omtsha” nguMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-1996;
“imithetho yepalamente yenkqubo yakudala” yimithetho yepalamente eyawiswa ngaphambi kokuba uqalise ukusebenza uMgaqo-siseko wangaphambili;
“uMgaqo-siseko wangaphambili” nguMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-1993 (uMthetho 200 ka-1993).
2. Ukuqhutyelwa phambili komthetho okhoyo
Wonke umthetho owawusebenza xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza uyaqhubeka usebenza, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho okanye ukutshitshiswa;
nakuvisisana kwawo noMgaqo-siseko omtsha.
Imithetho yepalamente yenkqubo endala eqhubeka isebenza ngokwesiqendwana (1)–
ayisebenzi ngokuphangaleleyo, ngokommandla okanye ngezinye iindlela, okungaphezu kokuphangalala eyayinako ngaphambi kokuba uqalise ukusebenza uMgaqo-siseko wangaphambili, ngaphandle kokuba yathi kamva yenziwa utshintsho ukuze ibe nokusebenza okuphangaleleyo kunangaphambili; kwaye
iqhubeka ilawulwa ngamagunya eyayilawulwa ngawo xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, kodwa ke ngokulawulwa nguMgaqo-siseko omtsha.
3. Ukuchazwa kwentsingiselo yemithetho yepalamente ekhoyo
Ngaphandle kokuba intsingiselo ayivisisani nokunye okubhaliweyo okanye ithi ibe yengafanelekanga nje ngokucacileyo, xa, nakuwuphi na umthetho wepalamente owawukho xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, kuthethwa–
ngeRiphablikhi yoMzantsi-Afrika okanye iphandle (ngaphandle kwaxa kuthethwa ngommandla), mawuthathwe njengobhekisela kwiRiphablikhi yoMzantsi-Afrika phantsi koMgaqo-siseko omtsha;
ngePalamente, ngeNdlu yoWiso-mthetho okanye ngeNdlu yeeNgwevu, mawuthathwe njengobhekisela kwiPalamente, kwiNdlu yoWiso-mthetho okanye kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke phantsi koMgaqo-siseko omtsha;
kuMongameli, ngoSekela-Mongameli, ngoMphathiswa, ngoSekela- Mphathiswa, okanye iKhabhinethi, mawuthathwe njengobhekisela kuMongameli, kuSekela-Mongameli, kuMphathiswa, kuSekela-Mphathiswa okanye kwiKhabhinethi phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ngokulawulwa sisiqendu 9 sesi Sihlomelo;
ngoMongameli weNdlu yeeNgwevu, mawuthathwe njengobhekisela kuSihlalo weBhunga lamaPhondo leZwelonke;
kwindlu yowiso-mthetho yephondo, kwiNkulumbuso, kuBaphathiswa bephondo okanye kuMphathiswa wephondo, mawuthathwe njengobhekisela kwindlu yowiso-mthetho yephondo, kwiNkulumbuso, kuBaphathiswa bephondo okanye kuMphathiswa wephondo phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ngokulawulwa sisiqendu 12 sesi Sihlomelo; okanye
kulwimi olusemthethweni okanye kwiilwimi ezisemthethweni, mawuthathwe njengobhekisela kulo naluphi na kwiilwimi ezisemthethweni phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
Ngaphandle kokuba intsingiselo ayivisisani nokunye okubhaliweyo okanye ithi ibe yengafanelekanga nje ngokucacileyo, xa, kuyo nayiphi na imithetho yepalamente eseleyo yenkqubo endala, kuthethwa–
ngePalamente, ngeNdlu yePalamente okanye ngendibano yowiso-mthetho okanye ngequmrhu leRiphablikhi okanye lephandle, mawuthathwe njengokubhekisela–
kwiPalamente phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ukuba ukulawulwa kwaloo mthetho wepalamente kuye, ngokoMgaqo-siseko wangaphambili, okanye ngokwesi Sihlomelo, kwafuduselwa kurhulumente wezwelonke; okanye
kwindlu yowiso-mthetho yephondo, ukuba ukulawulwa kwaloo mthetho wepalamente kuye, ngokoMgaqo-siseko wangaphambili okanye ngokwesi Sihlomelo, kwafuduselwa kurhulumente wephondo; okanye
ngoMongameli-Mbuso, ngeNkulu-Baphathiswa, ngoMlawuli okanye esinye isikhulu esiyintloko saseburhulumenteni, ngeKhabhinethi, ngeQumrhu laBaphathiswa okanye ngequmrhu loburhulumente leRiphablikhi, okanye ngephandle, mawuthathwe njengobhekisela–
kuMongameli phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ukuba ukulawulwa kwaloo mthetho wepalamente kuye, ngokoMgaqo-siseko wangaphambili okanye ngokwesi Sihlomelo, kwafuduselwa kurhulumente wezwelonke; okanye
kwiNkulumbuso yephondo phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ukuba ukulawulwa kwaloo mthetho wepalamente kuye, ngokoMgaqo- siseko wangaphambili, okanye ngokwesi Sihlomelo, kwafuduselwa kurhulumente wephondo.
4. INdlu yoWiso-mthetho
Nabani na owayelilungu leNdlu yoWiso-mthetho okanye owayenesikhundla kuyo xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, uba lilungu leNdlu yoWiso- mthetho okanye uba nesikhundla kuyo phantsi koMgaqo-siseko omtsha, kwaye uba nesikhundla njengelungu okanye njengomntu onesikhundla ngokoMgaqo-siseko omtsha.
INdlu yoWiso-mthetho njengoko yakhiwe ngokwesiqendwana (1) mayithathwe njengenyulwe phantsi koMgaqo-siseko omtsha ixesha eliphela ngomhla wama-30 kuEpreli 1999.
INdlu yoWiso-mthetho inamalungu angama-400 kulo lonke ixesha layo eliphela ngomhla wama-30 kuEpreli 1999, ngokulawulwa sisiqendu 49(4) soMgaqo-siseko omtsha.
Imigaqo nemiyalelo yeNdlu yoWiso-mthetho esebenzayo xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza, iyaqhubeka isebenza, ngokulawulwa lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa okanye utshitshiso.
5. Imisebenzi engagqitywanga ephambi kwePalamente
Nayiphi na imisebenzi engagqitywanga ephambi kweNdlu yoWiso-mthetho xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza makuqhutyekwe nayo ngokoMgaqo- siseko omtsha.
Nayiphi na imisebenzi engagqitywanga ephambi kweNdlu yeeNgwevu xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza mayibhekiswe kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke, lize iBhunga liqhubeke naloo misebenzi ngokoMgaqo-siseko omtsha.
6. Unyulo kwiNdlu yoWiso-mthetho
Akukho lunyulo lweNdlu yoWiso-mthetho omaluqhutywe ngaphambi komhla wama-30 kuEpreli 1999 ngaphandle kokuba iNdlu ichithiwe ngokwesiqendu 50(2) emva kwesindululo sokungamthembi uMongameli ngokwesiqendu 102(2) soMgaqo-siseko omtsha.
Ukusebenza kwesiqendu 50(1) soMgaqo-siseko omtsha kuxhonyiwe kude kube ngumhla wama-30 kuEpreli 1999.
Nangona watshitshiswayo uMgaqo-siseko wangaphambili, iSihlomelo 2 saloo Mgaqo-siseko esithe senziwa utshintsho siSongezo sesi Sihlomelo, siyasebenza–
kunyulo lokuqala lweNdlu yoWiso-mthetho phambi koMgaqo-siseko omtsha;
ekulahlekelweni bubulungu beNdlu kwiimeko ezingezizo ekuthethwe ngazo kwisiqendu 47(3) soMgaqo-siseko omtsha;
nasekuvalweni kwezithuba kwiNdlu, nasekuxabangelweni, ekuqwalaselweni ngokutsha, nasekusetyenzisweni koluhlu lwamaqela okuvalwa kwezithuba, de kube lunyulo lwesibini lweNdlu phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
Ukusebenza kwesiqendu 47(4) soMgaqo-siseko omtsha kuyaxhonywa kude kube lunyulo lwesibini lweNdlu yoWiso-mthetho phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
7. IBhunga lamaPhondo leZwelonke
Kwixesha eliphela ngaphambili nje kokuba kube kukuhlala kokuqala kwendlu yowiso-mthetho yephondo kwasemva konyulo lwayo lokuqala phantsi koMgaqo- siseko omtsha–
ubungakanani bokumelwa kweqela kwigqiza lephondo elikwiBhunga lamaPhondo leZwelonke mabulingane nobungakani ekwathi kubo amalunguendlu yeengwevu ali-10 ephondo akhethwa ngokwesiqendu 48 soMgaqo- sisekowangaphambili; kananjalo
ukwabelwa kwabathunywa abasisigxina nabathunywa nabathunywa abakhethekileyo kumaqela amelweyo kwindlu yowiso-mthetho yephondo, kungale ndlela ilandelayo:
1. iMpuma-Koloni ANC 5, NP 1 ANC 4
2. iFreyistata ANC 4, FF 1, NP 1 ANC 4
3. iRhawutini ANC 3, DP 1, FF 1, NP 1 ANC 3, NP 1
4. iKwaZulu-Natal ANC 1, DP 1, IFP 3, NP 1 ANC 2, IFP 2
5. iMpumalanga ANC 4, FF 1, NP 1 ANC 4
6. uMntla-Koloni ANC 3, FF 1, NP 2 ANC 2, NP 2
7. iPhondo loMntla ANC 6 ANC 4
8. uMntla-Ntshona ANC 4, FF 1, NP 1 ANC 4
9. iNtshona-Koloni ANC 2, DP 1, NP 3 ANC 1, NP 3
Iqela elimelweyo kwindlu yowiso-mthetho yephondo–
malikhethe abathunywa balo abasisigxina libakhetha kubantu ababengamalungu eNdlu yeeNgwevu xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, nabafumanekayo ukuba bakhonze njengabathunywa abasisigxina; kananjalo
linokukhetha abanye abantu ukuba babe ngabathunywa abasisigxina ukuba abekho abafumanekayo kumalungu alo akuqala eNdlu yeeNgwevu okanye ukuba alanelanga inani lawo elifumanekayo.
Indlu yowiso-mthetho yephondo mayimisele abathunywa bayo abasisigxina ngokuvumelana nokhetho lwamaqela.
Isiqendwana (2) nese-(3) zisebenza kuphela kumiselo lokuqala lwabathunywa abasisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke.
Isiqendu 62(1) soMgaqo-siseko omtsha asisebenzi ekukhethweni nasekumiselweni kwababengamalungu eNdlu yeeNgwevu bemiselwa njengabathunywa abasisigxina ngokwesi siqendu.
Imigaqo nemiyalelo yeNdlu yeeNgwevu esebenzayo xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza, mayisetyenziswe mayela nemisebenzi yeBhunga leZwelonke kangangoko enokuthi isetyenziswe, ngokulawulwa lulo naluphi na utshintsho olwenziweyo okanye ukutshitshiswa.
8. Ababengamalungu eNdlu yeeNgwevu
Umntu owayelilungu leNdlu yeeNgwevu ongamiselwanga njengomthunywa osisigxina kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke unelungelo lokuba lilungu elipheleleyo elivotayo lendlu yowiso-mthetho yephondo awakhethwa kulo loo mntu njengelungu leNdlu yeeNgwevu ngokwesiqendu 48 soMgaqo-siseko wangaphambili.
Ukuba umntu owayelilungu leNdlu yeeNgwevu ukhetha ukungabi lilungu lendlu yowiso-mthetho yephondo, loo mntu uthathwa njengoziyekeleyo ukuba lilungu leNdlu yeeNgwevu ngemini engaphambi kokuba uMgaqo-siseko omtsha uqalise ukusebenza.
Umvuzo, iimalana ezisecaleni namaqithiqithi omntu owayelilungu leNdlu yeeNgwevu omiselwe njengomthunywa osisigxina okanye njengelungu lendlu yowiso-mthetho yephondo, awunakuphungulwa umvuzo wakhe, neemalana ezisecaleni namaqithiqithi ngenxa nje yokuba emiselwe njengomthunywa osisigxina okanye njengelungu lendlu yowiso-mthetho yephondo.
9. Urhulumente wezwelonke
Nabani na owayenguMongameli, enguSekela-Mongameli okulawulo, enguMphathiswa okanye enguSekela-Mphathiswa phantsi koMgaqo-siseko wangaphambili xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, uyaqhubeka ekweso sikhundla ngokoMgaqo-siseko omtsha, kodwa ngokulawulwa sisiqendwana (2).
Kude kube ngumhla wama-30 kuEpreli 1999, isiqendu 84, 89, 90, 91, 93 nesama-96 soMgaqo-siseko omtsha masithathwe njengesifundeka ngendlela ekuchazwe ngayo kwiSongezelelo B sesi Sihlomelo.
Isiqendwana (2) asimthinteli uMphathiswa owayelilungu leNdlu yeeNgwevu xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza ukuba aqhubeke enguMphathiswa ekuthethwe ngaye kwisiqendu 91(1)(a) soMgaqo-siseko omtsha, ngendlela esi siqendu esifundeka ngayo kwiSongezelelo B.
10. Izindlu zowiso-mthetho zamaphondo
Nabani na owayelilungu okanye enesikhundla kwindlu yowiso-mthetho yephondo xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, uba lilungu okanye uba nesikhundla kwindlu yowiso-mthetho yelo phondo phantsi koMgaqo-siseko omtsha, kwaye uba sesikhundleni njengelungu okanye njengomntu onesikhundla ngokoMgaqo-siseko omtsha nangokomgaqo-siseko wephondo onokuthi uqulunqwe.
Indlu yowiso-mthetho yephondo eyakhiwe ngokwesiqendwana (1) mayithathwe njengenyulwe phantsi koMgaqo-siseko omtsha kude kube lixesha eliphela ngomhla wama-30 kuEpreli 1999.
Kude kube lixesha lokuphela kwayo eliphela ngomhla wama-30 kuEpreli 1999, nangokulawulwa sisiqendu 108(4), indlu yowiso-mthetho yephondo inamalungu alinani eliqingqelwe loo dnlu yowiso-mthetho phantsi koMgaqo-siseko wangaphambili kunye nenani labantu ababengamalungu eNdlu yeeNgwevu abathi baba ngamalungu endlu yowiso-mthetho ngokwesiqendu 8 sesi Sihlomelo.
Imigaqo nemiyalelo yendlu yowiso-mthetho yephondo eyayisebenza xa uMgaqo- siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza iyaqhubeka isebenza, ngokulawulwa lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa okanye ukutshitshiswa.
11. Unyulo lwezindlu zowiso-mthetho zamaphondo
Nangona watshitshiswayo uMgaqo-siseko wangaphambili, iSihlomelo 2 saloo Mgaqo-siseko, njengoko senziwa utshintsho siSongezelelo A sesi Sihlomelo, siyasebenza–
kunyulo lokuqala lwendlu yowiso-mthetho yephondo phantsi koMgaqo-siseko omtsha;
ekulahlekelweni bubulungu bendlu yowiso-mthetho kwiimeko ezingezizo ezo kuthethwe ngazo kwisiqendu 106(3) soMgaqo-siseko omtsha;
nasekuvalweni kwezithuba kwindlu yowiso-mthetho, nasekuxabangelweni, ekuqwalaselweni ngokutsha nasekusetyenzisweni koluhlu lwamaqela okuvala izithuba, kude kube kunyulo lwesibini lwendlu yowiso-mthetho phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
Ukusebenza kwesiqendu 106(4) soMgaqo-siseko omtsha kuyaxhonywa ngokumayela nendlu yowiso-mthetho yephondo kude kube lunyulo lwesibini lwendlu yowiso-mthetho phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
12. Oorhulumente bamaphondo
Nabani na owayeyiNkulumbuso okanye enguMphathiswa wephondo xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, uyaqhubeka ekweso sikhundla ngokoMgaqo-siseko omtsha nangokomgaqo-siseko wephondo onokuthi uqulunqwe, kodwa ngokulawulwa sisiqendwana (2).
De ibe iNkulumbuso enyulwe emva konyulo lokuqala lwendlu yowiso-mthetho yephondo phantsi koMgaqo-siseko omtsha ithabatha isikhundla sayo, okanye de libe iphondo liqulunqa umgaqo walo, kuxhomekeke ekubeni kokuphi okwenzeka kuqala, isiqendu 132 nese-136 soMgaqo-siseko omtsha masithathwe njengesifundeka ngendlela echazwe kwiSongezelelo C sesi Sihlomelo.
13. Imigaqo-siseko yamaphondo
Umgaqo-siseko wephondo ophunyezwe ngaphambi kokuba uMgaqo-siseko omtsha uqalise ukusebenza mawuvisisane nesiqendu 143 soMgaqo-siseko omtsha.
14. Ukwabelwa kwemithetho yepalamente kumaphondo
Umthetho wepalamente omayela nomcimbi owela kummandla wentsebenzo odweliswe kwiSihlomelo 4 okanye 5 soMgaqo-siseko omtsha nekwathi, xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza, wabe ulawulwa ligunya elingaphakathi kurhulumente wezwelonke, unokwabelwa nguMongameli, ngokwenza isihlokomiso, ewabela kwigunya elingaphakathi kurhulumente wephondo elichongwe ngaBaphathiswa bephondo.
Ngokwemfuneko ekhoyo ukuze ukwabelwa komthetho wepalamente ngokwesiqendwana (1) kwenziwe ngempumelelo, uMongameli, ngokwenza isihlokomiso–
usenokwenz’utshintsho kumthetho wepalamente ngenjongo yokulawula ukuchazwa kwentsingiselo yawo okanye ukusetyenziswa kwawo;
xa ukwabelwa kungasebenzi kuwo wonke umthetho wepalamente, usenokuwutshitshisa aze awuqale ngokutsha, unotshintsho olwenziweyo okanye ungenalo ekuthethwe ngalo kwisiqendu (a), ezo nxalenye ekusebenza kuzo ukwabelwa okanye ngokobungakanani bokusebenza kolwabelo kuwo; okanye
usenokuwulawula nawuphi na omnye umcimbi oyimfuneko ngenxa yokwabelwa, kuquka nokufuduswa kwabasebenzi, okanye ukufuduswa kwempahla, amatyala ekungenwe kuwo, amalungelo neembopheleleko, zisiya okanye zisuka kurhulumente wezwelonke okanye kowephondo okanye kwisebe likarhulumente, kwiziko lolawulo, kwinkonzo yokhuselo okanye elinye iziko.
Ikopi yesihlokomiso ngasinye esikhutshwe ngokwesiqendwana (1) okanye (2) mayisiwe kwiNdlu yoWiso-mthetho nakwiBhunga lamaPhondo leZwelonke zingaphelanga iintsuku ezili-10 sipapashiwe isihlokomiso.
Ukuba zombini iNdlu yoWiso-mthetho neBhunga leZwelonke zithi ngokuthath’ isigqibo zisichithe isihlokomiso okanye nayiphi na inxalenye yaso, isihlokomiso eso okanye inxalenye yaso iyaphelelwa, kodwa ibe ingachaphazeli–
ukubhadla kwento eyenziwe ngokwesihlokomiso eso okanye ngokwenxalenye yaso ngaphambi kokuba siphelelwe; okanye
ilungelo elizuziweyo okanye iimbopheleleko okanye ityala ekufuneka lithwalwe ngaphambi kokuba siphelelwe.
Xa umthetho wepalamente usabelwa ngokwesiqendwana (1), nanini na xa kumthetho wepalamente kubhekiselwa kwigunya elilawulayo, mawuthathwe njengobhekisela kwigunya owabelwe kulo.
Nakuphi na ukwabelwa komthetho wepalamente ngokwesiqendu 235(8) soMgaqo-siseko wangaphambili, kuquka naluphi na utshintsho olwenziweyo okanye ukutshitshiswa nokuqulunqwa ngokutsha komthetho wepalamente, naso nasiphi na esinye isenzo esithathwe ngokwegunya leso siqendu, makuthathwe njengokwenziwe ngokwegunya lesi siqendu.
15. Imithetho yepalamente ekhoyo engaphaya kwegunya lePalamente lokuwis’ imithetho
Igunya elingaphakathi kurhulumente wezwelonke elilawula nawuphi na umthetho wepalamente ongaphaya kwegunya lepalamente lokuwis’imithetho xa uMgaqo- siseko omtsha uqalisa ukusebenza, liqhubeka linalo igunya lokuyilawula loo mithetho yepalamente de yabelwe kwigunya elingaphakathi kurhulumente wephondo ngokwesiqendu 14 sesi Sihlomelo.
Isiqendwana (1) siphelelwa emva kweminyaka emibini uqalisile ukusebenza uMgaqo-siseko omtsha.
Zonke iinkundla, kuquka neenkundla zeenkokeli zomthonyama, ezazikho xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, ziyaqhubeka zisebenza, zisebenzisa negunya lazo ngokomthetho wepalamente osebenzayo kuzo, kwaye nabani na okwisikhundla sokuba ngumchopheli-matyala uyaqhubeka ekweso sikhundla ngokomthetho wepalamente osebenza ngokweso sikhundla, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa okanye ukutshitshiswa kwaloo mthetho wepalamente;
nakukuvisisana kwawo noMgaqo-siseko omtsha.
INkundla yoMgaqo-siseko eyasekwa nguMgaqo-siseko wangaphambili iba yiNkundla yoMgaqo-siseko phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
[Isiqendwana (b) sacinywa sisiqendu 20(a) soMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2001.]
ICandelo leZibheno leNkundla Ephakamileyo yoMzantsi-Afrika liba yiNkundla Ephakamileyo yeZibheno phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
Icandelo lephondo okanye lasekuhlaleni leNkundla Ephakamileyo yoMzantsi- Afrika okanye inkundla ephakamileyo yephandle okanye icandelo jikelele lenkundla enjalo liba yiNkundla Ephakamileyo phantsi koMgaqo-siseko omtsha, kungabi lutshintsho kummandla ophantsi kwayo, ngokulawulwa luhlengahlengiso oluxelwe kwisiqendwana (6).
Nabani na okwisikhundla okanye othathwa njengokwisikhundla sokuba nguMongameli weeJaji, iSekela-Mongameli weeJaji okanye ijaji yenkundla ekuthethwe ngayo kwisiqendu (a) xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza, uba nguMongameli weeJaji, uSekela-Mongameli weeJaji okanye ijaji yaloo nkundla phantsi koMgaqo-siseko omtsha, ngokulawulwa luhlengahlengiso oluxelwe kwisiqendwana (6).
Ngaphandle kokuba intsingiselo ayivisisani nokunye okubhaliweyo okanye ithi ibe yengafanelekanga nje ngokucacileyo, xa, kuwo nawuphi na umthetho wepalamente okanye inkqubo, kuthethwa–
ngeNkundla yoMgaqo-siseko phantsi koMgaqo-siseko wangaphambili, makuthathwe ngokuthi kuthethwa ngeNkundla yoMgaqo-siseko phantsi koMgaqo-siseko omtsha;
ngeCandelo leZibheno leNkundla Ephakamileyo yoMzantsi-Afrika, makuthathwe ngokuthi kuthethwa ngeNkundla Ephakamileyo yeZibheno; naxa kuthethwa
ngecandelo lephondo okanye lasekuhlaleni leNkundla Ephakamileyo yoMzantsi-Afrika okanye inkundla ephakamileyo yephandle okanye icandelo jikele laloo nkundla, makuthathwe ngokuthi kuthethwa ngeNkundla Ephakamileyo.
Kamsinya kangangoko kunokwenzeka emva kokuba uMgaqo-siseko omtsha uqalisile ukusebenza, zonke iinkundla, kuquka nobume bazo, nendlela ezakhiwe ngayo, nokusebenza, negunya lazo, nayo yonke imithetho yepalamente echaphazelekayo, mazihlengahlengiswe ngenjongo yokuba neenkundla ezifanelana neemfuneko zoMgaqo-siseko omtsha.
Ilungu leKhabhinethi eliphathiswe ukusingathwa kobulungisa, emva kokubonisana neKomishoni yeeJaji, malilulawule uhlengahlengiso ekuthethwa ngalo kwisiqendu (a).
Nabani na okwisikhundla, xa uMthetho Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-2001 uqalisa ukusebenza, ekwisikhundla sokuba-
nguMongameli weNkundla yoMgaqo-siseko, uba yiJaji eyiNtloko njengoko kuxelwe kwisiqendu 167(1) soMgaqo-siseko omtsha;
nguSekela-Mongameli weNkundla yoMgaqo-siseko, uba liSekela leJaji eyiNtloko njengoko kuxelwe kwisiqendu 167(1) soMgaqo-siseko omtsha;
yiJaji eyiNtloko, uba nguMongameli weNkundla Ephakamileyo yeZibheno njengoko kuxelwe kwisiqendu 168(1) soMgaqo-siseko omtsha; aze
oliSekela leNtloko yeeJaji abe nguSekela-Mongameli weNkundla Ephakamileyo yeZibheno njengoko kuxelwe kwisiqendu 168(1) soMgaqo-siseko omtsha.
Yonke imigaqo, imimiselo okanye okanye izalathiso ezenziwe nguMongameli weNkundla yoMgaqo-siseko okanye yiJaji eyiNtloko ebezisebenza ngaphambi nje kokuba kuqalise ukusebenza uMthetho Wokwenz’Utshintsho kuMgaqo- siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-2001, ziyaqhubeka zisebenza de zibe zitshitshisiwe okanye zenziwa utshintsho.
Ngaphandle kokuba intsingiselo ayivisisani nokunye okubhaliweyo okanye ithi ibe yengafanelekanga nje ngokucacileyo, xa, nakuwuphi na umthetho okanye kwinkqubo kuthethwa ngeJaji eyiNtloko okanye ngoMongameli weNkundla yoMgaqo-siseko, makuthathwe ngokuthi kuthethwa ngeJaji eyiNtloko njengoko kuxelwe kwisiqendu 167(1) soMgaqo-siseko omtsha.
[Isiqendwana (7) songezwa sisiqendu 20(b) soMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2001.]
17. Amatyala abengekaqukunjelwa ephambi kweenkundla
Onke amatyala awayengekaqukunjelwa ephambi kwenkundla xa uMgaqo-siseko omtsha wawuqalisa ukusebenza, makaqukunjelwe ngokungathi uMgaqo-siseko omtsha awuqulunqwanga, ngaphandle kokuba ukwenziw kobulungisa kufunisa ngenye indlela.
18. Igunya elitshutshisayo
Isiqendu 108 soMgaqo-siseko wangaphambili siyaqhubeka sisebenza de uMthetho wePalamente ekuthethwe ngawo kwisiqendu 179 soMgaqo-siseko omtsha uqalise ukusebenza. Esi siqendwana asikuchaphazeli ukumiselwa koMlawuli Wotshutshiso weZwelonke ngokwesiqendu 179.
Umtshutshisi omkhulu osesikhundleni xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza uyaqhubeka esebenza ngokomthetho wepalamente osebenza kweso sikhundla, ngokulawulwa sisiqendwana (1).
19. Izifungo nezibhambathiso
Umntu oqhubeka esesikhundleni ngokwesi Sihlomelo nothe wathath’isifungo sokungen’ esikhundleni okanye wenza isibhambathiso esinyanisekileyo phantsi koMgaqo-siseko wangaphambili, akanyanzelekanga ukuba asiphinde isifungo sokungen’esikhundleni okanye isibhambathiso esinyanisekileyo phantsi koMgaqo-siseko omtsha.
20. Amanye amaziko angokoMgaqo-siseko
Kwesi siqendu elithi “iziko elingokoMgaqo-siseko” lithetha–
[Isiqendu (b) senziwa utshintsho sisiqendu 4 soMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo- siseko ka-1998.]
iBhanki EnguVimba YoMzantsi-Afrika;
iKomishoni yeeMali neeRhafu;
iKomishoni yeeJaji; okanye
iBhodi yeeLwimi yoMzantsi-Afrika.
Iziko elingokoMgaqo-siseko elisekwe ngokoMgaqo-siseko wangaphambili liyaqhubeka lisebenza ngokomthetho wepalamente osebenza kulo, kwaye nabani na okwisikhundla sokuba lilungu lekomishoni, ilungu lebhodi yeBhanki EnguVimba okanye leBhodi yeeLwimi yaseMzantsi-Afrika, uMkhuseli woLuntu okanye uMphicothi-zimali-Jikelele xa uMgaqo-siseko omtsha uqalisa ukusebenza, uyaqhubeka esesikhundleni ngokomthetho wepalamente osebenza kweso sikhundla, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho olunokuthi lwenziwe okanye ukutshitshiswa kwaloo mthetho wepalamente; nangokulawulwa
kukuvisisana kwawo noMgaqo-siseko omtsha.
Isiqendu 199(1), 200(1), (3) nese-(5) ukuya kwese-(11) nesama-201 ukuya kwesama-206 soMgaqo-siseko wangaphambili ziyaqhubeka zisebenza zide zibe zitshitshisiwe ngumthetho wepalamente ophunyezwe ngokwesiqendu 75 soMgaqo-siseko omtsha.
Amalungu eKomishoni yeeJaji ekuthethwe ngawo kwisiqendu 105(1)(h) soMgaqo- siseko wangaphambili ayayeka ukuba ngamalungu eKomishoni kusakumiselwa amalungu ekuthethwe ngawo kwisiqendu 178(1)(i) soMgaqo-siseko omtsha.
IBhunga leVolkstaat elasekwa ngokoMgaqo-siseko wangaphambili liyaqhubeka lisebenza ngokomthetho wepalamente osebenza kulo kwaye nabani na osesikhundleni sokuba lilungu leBhunga xa uMgaqo-siseko uqalisa ukusebenza uyaqhubeka ekweso sikhundla ngokomthetho wepalamente osebenza kweso sikhundla, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa okanye ukutshitshiswa kwaloo mthetho wepalamente; nakukulawulwa
Isiqendu 184A nese-184B(1)(a),(b) no-(d) soMgaqo-sisekowangaphambili ziyaqhubeka zisebenza zide zibe zitshitshiswe nguMthethowePalamente ophunyezwe ngokwesiqendu 75 soMgaqo-siseko omtsha.
21. Ukuwiswa kwemithetho yepalamente efunwa nguMgaqo-siseko
Xa uMgaqo-siseko omtsha ufuna ukuba kuwiswe umthetho wepalamente wezwelonke okanye wephondo, loo mthetho wepalamente mawuwiswe ligunya elifanelekileyo kungadanga kube lixesha elide ukususela kumhla wokuqalisa kokusebenza koMgaqo-siseko omtsha.
Isiqendu 198(b) soMgaqo-siseko omtsha asinakunyanzeliswa de kuwiswe umthetho ekuthethwe ngawo kweso siqendu.
Isiqendu 199(3) soMgaqo-siseko omtsha asinakunyanzeliswa zingekapheli iinyanga ezintathu uwisiwe umthetho wepalamente ekuthethwe ngawo kwesi siqendu.
Umthetho wepalamente wezwelonke ekucingwa ngawo kwisiqendu 217(3) soMgaqo-siseko omtsha mawumiswe ingekapheli iminyaka emithathu ukususela kumhla owaqalisa ngawo ukusebenza uMgaqo-siseko omtsha, kodwa ukungabikho kwalo mthetho wepalamente kweli thuba akukuthinteli ukuyenza isebenze inkqubo ekuthethwe ngayo kwisiqendu 217(2).
De kube kuwiswe uMthetho wePalamente ekuthethwe ngawo kwisiqendu 65(2) soMgaqo-siseko omtsha, indlu yowiso-mthetho nganye yephondo inokuzenzela isigqibo ngenkqubo yayo ekuthi ngayo kuthiwe jize igunya kwigqiza layo lokuba livote egameni layo kwiBhunga lamaPhondo leZwelonke.
De kube uwisiwe umthetho wepalamente ekuthethwe ngawo kwisiqendu 229(1)(b) soMgaqo-siseko omtsha, umasipala uqhubeka enalo igunya lokufuna irhafu nezinye iintlawulo awayenegunya lokuzifuna xa uMgaqo-siseko wawuqalisa ukusebenza.
22. Ubunye besizwe noxolelwano
Kungakhathaliseki ukuba zithini na ezinye iinxalenye zoMgaqo-siseko omtsha, kwaye nangona watshitshiswayo uMgaqo-siseko wangaphambili, konke okutshiwoyo okuphathelele kuxolelo okuqulethwe kuMgaqo-siseko wangaphambili phantsi komxholo othi “UBunye beSizwe noXolelwano” kuthathwa njengokuyinxalenye yoMgaqo-siseko omtsha ngokwenjongo yePromotion of National Unity and Reconciliation Act 34 ka-1995, eyathi yenziwa utshintsho, nangokwenjongo yokuba loo Mthetho uhlale usebenza.
Ngokwenjongo yokusebena kwesiqendwana (1), umhla othi “6 Disemba 1993”, apho ubonakala khona kuMgaqo-siseko wangaphambili phantsi komxholo othi “National Unity and Reconciliation”, mawufundeke ngokuthi “11 Meyi 1994”.
[Isiqendwana 2 songezwa sisiqendu 3 soMthetho Wokuqala Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-1997.]
23. UMqulu wamaLungelo
Umthetho wepalamente wezwelonke ekucingwa ngawo kwisiqendu 9(4), 32(2) nesama-33(3) soMgaqo-siseko omtsha mawuwiswe ingaphelanga iminyaka emithathu ukususela kumhla owaqalisa ngawo ukusebenza uMgaqo-siseko omtsha.
De kube kuwiswe umthetho wepalamente ekucingwa ngawo kwisiqendu 32(2) nesama-33(3) soMgaqo-siseko omtsha–
isiqendu 32(1) masithathwe njengesifundeka ngale ndlela:
“(1) Wonke umntu unelungelo lokufikelela kuyo yonke ingcombolo egcinwe ngurhulumente okanye ngamacandelo akhe kulo naliphi na inqwanqwa likarhulumente ukuba loo ngcombolo ifunekela ukusetyenziswa okanyeukukhuselwa kwalo naliphi na kumalungelo akhe.”; kwaye
isiqendu 33(1) nese-(2) masithathwe njengesifundeka ngale ndlela:
“Wonke umntu unelungelo–
(a) lokusingathwa ngokusemthethweni komcimbi wakhe ofun’isigqibo xa elinye lamalungelo akhe lichaphazeleka okanye lisongelwa;
(b) lokusingathwa ngenkqubo enobulungisa komcimbi wakhe ofun’ isigqibo xa elinye lamalungelo akhe okanye ulindelo lwakhe olufanelekileyo luchaphazeleka okanye lusongelwa;
(c) lokunikwa izizathu ezibhaliweyo ngokusingathwa komcimbi wakhe ofun’ isigqibo ochaphazela elinye lamalungelo akhe, ngaphandle kokuba izizathu zeso sigqibo ziye zadandalaziswa esidlangalaleni;
(d) nelokusingathwa komcimbi ofun’isigqibo ngendlela ethethelelekayo ngokumayela nezizathu ezinikiweyo xa elinye lamalungelo akhe lichaphazeleka okanye lisongelwa.”
Isiqendu 32(2) nesama-33(3) soMgaqo-siseko omtsha siyaphelelwa ukuba umthetho wepalamente ekucingwa ngawo kwezo ziqendu awuthi uwiswe kwisithuba seminyaka emithathu ukususela kumhla wokuqalisa koMgaqo-siseko omtsha ukusebenza.
24. Imisebenzi yolawulo karhulumente neenkonzo zokhuseleko
Isiqendu 82(4)(b), 215, 218(1), 219(1), 224 ukuya kwesama-228, 236(1), (2), (3), (6), (7)(b) nesesi(8), 237(1) nese-(2)(a) nesama-239(4) nesesi-(5) soMgaqo- siseko wangaphambili ziyaqhubeka zisebenza ngokungathi uMgaqo-siseko wangaphambili awuzange utshitshiswe, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa kwezo ziqendu njengoko kuchazwe kwiSongezelelo D;
lulo naluphi na olunye utshintsho okanye ukutshitshiswa kwezo ziqendu nguMthetho wePalamente ophunyezwe ngokwesiqendu 75 soMgaqo-siseko omtsha; nangokulawulwa
kukuvisisana kwazo noMgaqo-siseko omtsha.
IKomishoni yaBasebenzi bakaRhulumente neekomishoni zenkonzo yamaphondo ekuthethwe ngazo kwiSahluko 13 soMgaqo-siseko wangaphambili ziyaqhubeka zisebenza ngokweso Sahluko nomthetho wepalamente osebenza kuzo ngokungathi eso Sahluko asizange sitshitshiswe, de ibe iKomishoni neekomishoni zenkonzo yamaphondo zitshitshiswe nguMthetho wePalamente ophunyezwe ngokwesiqendu 75 soMgaqo-siseko omtsha.
Ukutshitshiswa koMgaqo-siseko wangaphambili akusichaphazeli nasiphi na isihlokomiso esikhutshwe ngokwesiqendu 237(3) soMgaqo-siseko wangaphambili, kwaye nasiphi na isihlokomiso esinjalo siqhubeka sisebenza, ngokulawulwa–
lulo naluphi na utshintsho olunokwenziwa okanye ukutshitshiswa; nangokulalwulwa
kukuvisisana kwaso noMgaqo-siseko omtsha.
25. Okunye ukungafaneleki kwizindlu zowiso-mthetho
Nabani na, xa wawuqalisa ukusebenza uMgaqo-siseko omtsha, owayethothoza isigwebo kwiRiphablikhi sokuvalelwa entolongweni ixesha elingaphezu kweenyanga ezili-12 engakhethiswanga fayini, akafaneleki ukuba abe lilungu leNdlu yoWiso-mthetho okanye lendlu yowiso-mthetho yephondo.
Ukungafaneleki komntu ngokwesiqendwana (1) –
kuyaphelelelwa ukuba ukufunyaniswa kwakhe enetyala kuyachithwa esakubhena, okanye ukuba isigwebo siyancitshiswa esakubhena sibe sisigwebo esingamenzi angafaneleki loo mntu;
kuphela emva kweminyaka emihlanu sigqityiwe isigwebo.
26. Urhulumente wasekuhlaleni
Kungakhathaliseki okutshiwo sisiqendu 151, 155, 156 nese-157 soMgaqo-siseko omtsha –
okutshiwo yiLocal Government Transition Act 209 ka-1993, njengoko isenokuman’ukuthi yenziwe utshintsho ngumthetho wepalamente wezwelonke ovisisana noMgaqo-siseko omtsha, kuhlala kusebenza ngokumayela neBhunga likaMasipala de libe iBhunga likaMasipala elithabath’ indawo yelo Bhunga livakaliswe njengelinyuliweyo njengesiphumo sonyulo- jikelele lokuqala lwamaBhunga kaMasipala emva kokuqalisa ukusebenza koMgaqo-siseko omtsha; kwaye
[Isiqendwana (a) sathatyathelw’indawo sisiqendu 5(a) soMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-1998.]
inkokeli yomthonyama yoluntu oluphila ngokomthetho wemveli nehlala kumhlaba okummandla webhunga lasekuhlaleni lethutyana, webhunga lasemaphandleni lethutyana okanye webhunga labameli lethutyana, ekuthethwe ngawo kwiLocal Government Transition Act ka-1993, nekuthe kwabonaka ukuba iyileyo ichazwe kwisiqendu 182 soMgaqo-siseko wangaphambili, inelungelo ngenxa yesikhundla sayo ukuba ibe lilungu lelo bhunga de libe iBhunga likaMasipala elithabath’indawo yelo bhunga libe libhengezwe njengelinyuliweyo njengesiphumo sonyulo-jikelele lokuqala lwamaBhunga kaMasipala emva kokuqalisa kokusebenza koMgaqo-siseko omtsha.
[Isiqendu (b) sathatyathelw’indawo sisiqendu 5(a) soMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-1998.]
Isiqendu 245(4) soMgaqo-siseko wangaphambili siyaqhubeka sisebenza kude kuphelelwe ukusetyenziswa kweso siqendu. Isiqendu 16(5) nese-(6) seLocal Government Transition Act ka-1993 asinakutshitshiswa ngaphambi komhla wama- 30 kuEpreli 2000.
[Isiqendwana (2) senziwa utshintsho sisiqendu 5(b) soMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-1998.]
27. Ukugcinwa kweMithetho yePalamente neMithetho yamaphondo
Isiqendu 82 nese-124 soMgaqo-siseko omtsha azikuchaphazeli ukugcinwa kweMithetho yePalamente okanye kweMithetho yamaphondo ephunyezwe ngaphambi kokuqalisa koMgaqo-siseko omtsha ukusebenza.
28. Ukubhaliswa kwempahla engenakufuduswa eyekarhulumente
Kusakuveliswa isiqinisekiso ligunya elifanelekileyo esithi impahla engenakufuduswa eyekarhulumente yekarhulumente othile ngokwesiqendu 239 soMgaqo-siseko wangaphambili, umgcini-zitayitile makakubhale oko encwadini efanelekileyo kwincwadi yobumnini okanye kolunye uxwebhu, ebhala loo mpahla engenakufuduswa egameni laloo rhulumente.
Akukho ntlawulo okanye mrhumo onokufunwa ngokubhaliswa okungokwesiqendwana (1).
Home UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika Isihlomelo 6. Amalungiselelo Exesha Eliphakathi